याद गर्नुभएको छ, औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ! जानी राखे राम्रो -
Posted on October 23, 2019 October 23, 2019 by Npnews
एजेन्सी, ५ कार्तिक । हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खानु हुँदैन । तर सामान्यतय टाउको दुखेदेखि झाडावान्ता हुँदा भने कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ जस्तै भइसकेको हुन्छ र यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औषधि खाने गरेका छौं । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् ।
यो हो संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, जसको चौडाई २६ लेन छ !
काठमाडौं, ६ कार्तिक । नेपालमा सडक फराकिलो बनाउने अभियान चलिरहेकै सन्दर्भमा संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडकको बारेमा समाचार प्रकाशित भएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित द क्याटी फ्रि वे संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक मानिएको छ ।